BLACKPINK's Lisa ကသူမရဲ့ဆံပင်တိုတိုကို - Bang မရှိရင် | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
သူမလက်မှတ်ထိုးသည့်ဘောင်းဘီများကိုဘေးဖယ်ထားပြီးနောက်ပရိသတ်များသည် BLACKPINK ၏ Lisa ၏အသွင်အပြင်အသစ်ကိုအလုံအလောက်မရရှိနိုင်ကြပါ။ သူတို့ကသူမရဲ့အလှအပကိုချီးမွမ်းနေတယ်။
ပရိသတ်တွေဟာ Lisa ရဲ့နဖူးကိုဘာကြောင့်အရမ်းစွဲမက်နေကြတာလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမနဖူးကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့အရမ်းပျော်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ကဘယ်တော့မှမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lisa ကသူမ Bangs မပါပဲဆံပင်ရှည်ကိုမြင်တဲ့အခါဘာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရိုင်းရိုင်းသွားတာလဲ။ သူမဆံပင်တိုနဲ့လှပနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကနဖူးကိုချစ်သလိုပဲ
Lisa ဟာ Black-half ဝက်ဝံအနုပညာရှင်အမည်ရှိဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူကိုမိမိကိုယ်ကိုဗွီဒီယိုရိုက်ကူးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ဂျိမ်း Rusameekae Fagerlund မိမိအလာမည့်နာမည်ကြီးလက်ဝှေ့ပွဲစဉ်၌တည်၏။ သူအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တွေးမိမှာပါ။
Lisa ကိုနှစ်သိမ့်မှုနှင့်အတူသာယာကြည်နူးစွာဖြင့်ရိုးရှင်းစွာသက်သောင့်သက်သာရှိစေရန် hoodie ကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကလတ်ဆတ်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူမ၏ချည်များကိုဘေးချင်းယှဉ်။ ခွဲလိုက်သောအခါသူမက ပို၍ ပင်ငယ်သည်။
| rusameekae / Instagram ကို
အပြာရောင်တွေကသူမကိုပြန်ချစ်သွားပြီးသူမရဲ့လှပမှုကိုလေးစားဖို့“ BANGLESS LISA” ဆိုတဲ့စကားစုကိုထပ်ခါထပ်ခါစကားပြောနေတတ်သည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? Lisa မပါသောနုပျိုသောနုပျိုသောစွမ်းအင်သည်သူမ၏ပရိသတ်များအားတစ်ဖန်ပြန်လည်စွဲမှတ်စေသည်။ ကိုရီးယားပေါ့ပ်, KPop ချစ်ကြရမည် ဒါဟာ Lisa လိုကောင်မလေးရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်အောင်လုပ်နေတယ်။
| @ chnyxxxxx / တွစ်တာ
သတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘ ၀ ၌တစ်ချိန်ကငယ်ရွယ်ခဲ့ပြီ၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်၍ မှားသောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လူငယ်များကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ မကောင်းသောရွေးချယ်မှုများသည်ရွယ်တူချင်းဖိအား၊ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှု (သို့) သင်၏လက်ရှိအခြေအနေများမှဖြစ်စေ၊ အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ ဤသည် Gyopo Tacticool Reloaded Oppa, ထွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ လာမည့် post ကိုမှီတိုင်အောင်, Fighting!
source: Instagram ကို
မှာစစ်မှန်နှင့်အတူဆွေးနွေးပါ "တောင်ကိုရီးယား၏ Youtube Youtube Channel"
လွန်ခဲ့သောKim Jong Kook သည် Daesang ကို 2020 SBS Entertainment Awards တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
နောက်တစ်ခုSuncheon Film Set နှင့် Gangnam - Blues 1970